नेपाली लघु-उपन्यास : पृथ्वी ,राष्ट्रियता र मानिस - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : अब अति भयो।
Poem : Request →
कती पटक पढियो : 321
नारद, फूलसरा र हिमलाल तथा सहायक पात्रहरु: चार छोरीहरू
नारद र फूलसरा चाँही त बिहान भाले बासेदेखि अबेर साँझसम्म काममा जोतिनुको विकल्प थिएन। हुनपनि आकारले ठुलो परिवारको पालन पोषण निकै गाह्रो थियो उनको परिवारलाई। तरपनि आशाको त्यान्द्रो हिमलालको जन्मले सिङ्गो परिवारमा उत्साहसहितको उज्यालो ल्याएको थियो ।सबैको माया र स्नेहको केन्द्रबिन्दु हिमलाललाई सबैले माया गरेर हेमु भनेर बोलाउथे । यथेष्ठ माया ममता पाएको भएपनि उ बिल्कुल मात्तिएको थिएन ।उमेर बढ्दै जाँदा उसलाई पनि गाउँको आधुनिक सुबिधबिहिन प्राथमिक स्कुलमा भर्ना गरियो जबकि कान्छी बाहेक उसका ३ दिदीहरुले त्यस स्कुलको पढाइ सकाएका थिए भने टाढाको स्कुलमा गएर पढाइलाई निरन्तरता दिने परिस्थिति थिएन । उ कान्छी दिदीसँग स्कुल जान्थ्यो । ३ दिदीहरुले इच्छा हुंदाहुदै आफुहरुले धेरै पढ्न नपाए पनि भाइलाई सबै मिलेर पढाउने अठोट गरेका थिए ।त्यसैले जे छ त्यसैमा सन्तुष्टि गर्न सक्ने परिवारका सदस्यहरुका कारण नारद र फूलसरा पनि खुसी थिए ।
नारदका सबै छोरा-छोरी चलाख थिए । लाग्थ्यो , गरिबीले तिनीहरूलाई प्रशिक्षण गरिरहेको थियो जिउने तरिका सिकाईरहेको थियो ।भोको न भकारीको अवस्था भएपनि उनीहरू स्वस्थ र सुन्दर थिए । हिमलाल पढाइमा राम्रै थियो भने फुटबल खेल्न औधी मन पराउँथ्यो ।सुरु सुरुमा टोल-टोलका समूह बनाएर आफ्नो प्यारो टोललाई जिताउन दिलोज्यान दिएर खेल्थे । पछि बिस्तारै गाउँ – गाउँको खेल हुन थाल्यो ।सुरुमा आफ्नो टोललाई आफ्नो राष्ट्रियता , अनि आफ्नो गाउँलाई गर्दै उसको माया -ममताको क्षेत्र र राष्ट्रियतामा पनि व्यापकता आयो ।
अन्तरिक रूपमा छोरीहरुलाई चाहेजति पढाउन नपाएकोमा निकै दुखी थिए एकातिर भने अर्को तर्फ अत्यन्तै इमान्दार भएपनि उमेर बढ्दै जाँदा तिनीहरूको जवानीको मर्म र आवश्यकता बुझेर समयमा राम्ररी तिनीहरूको बिहे-दान गर्न नसकिने होकी भन्ने ठुलो पिरलोमा थिए ती दम्पत्ति । नारदले पहाडमा भन्दा न्यून आर्थिक अवस्था हुने परिवारलाई तराईमा जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुने कुरा बर्षौं पहिला तराई झरेका आफ्ना अफ़न्तहरुबाट सुनेका थिए । उनी फूलसरासंग राम्रो सर-सल्लाह र छोरा-छोरीहरू सँग सामान्य कुरा गरेर तराईको बारेमा राम्ररी कुरा बुझ्न एकपटक तराई जाने निधो गरे । उनी एकजना आफन्त जो धेरै वर्ष पहिला बसाई सरेर तराई गएका थिए, तिनको घरमा पुगे । पहिले धेरै चोटि भेट्न बोलाउंदा पनि पुग्न नसकेको नारद ती आफन्तकोमा लाज र अप्ठ्यारो मानी मानी गए ।
फराकिलो जमिन र निबेक-धिमेक गरेरै भएपनि पहाडी प्रदेशको तुलना केही प्रगति गर्न सकिने सम्भावना बुझेर आफन्तको राम्रै सहयोग हुनसक्ने आस्वाशन समेत पाएर एक हप्ता मै उनी घर फर्के । आफन्तहरुको राम्रो बन्दोबस्त देखेर पहिल्यै तराई नझरेकोमा हल्का पश्चाताप गर्दै घरमा सारा बेली विस्तार लगाए जसबाट फूलसरा लगायत परिवारका सदस्यहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आयो । छोरीहरू हल्का उत्साहित भए भने हिमलाललाई खासै प्रभाव परेन । उनले आफ्ना आफन्तलाई जग्गा जमिन बेचेर तराई जाने कुरा बताए । ती आफन्तले उनलाई जहाँ गएपनि तेस्तै हो, यहाँ पनि विकासका पूर्वाधार बन्दै छन् भनेर नजाने सल्लाह दिएपनि उनले आफ्नो मन- मष्तिस्कमा बनाएको बलियो निर्णयलाई बदल्न सक्ने कुरा थिएन, फलस्वरूप सामान्य मूल्यमा भएको जग्गा-जमिन बेचेरै छाडे । हिमलालको पहाडी राष्ट्रियता तराईको राष्ट्रियतामा परिणत हुनेकुरा त्यति सजिलो भने थिएन । अन्तत, सदियौं देखिको त्यो परिवारको त्यो पहाडी इलाकसंगको भावनात्मक सम्बन्ध एक प्रकारले अन्त्य हुने भो । उनको यो निर्णय निकै ठुलो छलांग नै हो र ठुलो संक्रमण पनि । छाडेर जाने निर्णय भएपनि सजिलो भने थिएन, व्यबहारिकरुपमा त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न ।
जति जति तराई झर्ने दिन नजिकिन थाल्यो, त्यति त्यति नारद र फूलसरा दुबिधामा भएपनि छोरीहरू र हिमलाल भने खुसी देखिन्थे किनकि कान्छी छोरी र हिमलालले राम्ररी नबुझेर खुसी थिए भने हुर्केका छोरीहरुले चाँही बढेको जवानी र आवश्यकताका कारण नंया अवसर पाउने हचुवा आशामा खुसी थिए । जे जसरि भएपनि उनीहरूले पिर नमानेकोमा नारद र फूलसरालाई राम्रै लागेको थियो । परिवाररुपी ठुलो जहाजका चालकदल(नारद र फूलसरा) भने गहिरो सोचाईमा थिए ।
त्यति बेला निर्णय भै हाल्यो केही परिस्थिति सुधारेर हामी यतै फर्किन्छौँ र भेटघाटको लागि त वर्षेनी आइरहन्छौँ भन्दै आफन्त र गाउँलेहरूले प्याक गरेका ब्याग प्याक लिएर बाटो लागे ।तर हिंडे पछि ………!!!!!!! ….. फर्किने भन्ने कुरा ?????…. राष्ट्रियता ?, पहाडको राष्ट्रियता ??, तराईको राष्ट्रियता???…. कुन ठाउँ कसको ??????
नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, आफन्तहरुसंगको भेटघाट, समथर भूभाग , जहाँ गए पनि सेवा -सत्कार ।सुरु सुरुमा लाग्थ्यो कि ठिकै गरिएछ । तर केही दिन पछाडि, सबै आ-आफ्नो काममा लागे । आफ्नो लागि कसले सारा बन्दोबस्त मिलाइदिने ? त्यसको लागि पनि ठुलो अनुनय -विनय गर्नुपर्ने । जे जस्तो भएपनि बर्षौं देखि जोडेका कतिपय कुरा छाडेकै कारण समस्या सुरु भो । अनि सानो पुँजी ,ठुलो परिवार , गर्न सके आम्दानीका स्रोत धेरै हुने भएपनि सुरुमा नौलो अवस्थामा धेरै समस्या आइलाग्यो तिनीहरूलाई । केही समय त जे भएपनि पहाड नै ठिक थियो जस्तो भयो । तर केही समय लगत्तै, जब एउटा सानो जमिनको टुक्रा किनेर सानो घर बनाउन सुरु के गरेका थिए , ठेक्कामा प्रशस्त जमिन लिने मौका समेत मिल्यो । घरमा काम गर्ने मान्छे प्रशस्त भएकोले टन्न खेतीपाती उब्जाए ।
राम्रै आम्दानी र बचत समेत भएकोले परिवारका सबै सदस्यको जीवनस्तरमा केही सुधार हुन थाल्यो ।सौन्दर्य र अनुशासनका धनी छोरीहरुको वर्षेनी बिहे गरदिनु पर्ने हुन थालेको थियो । तराई झरेको २ वर्षपछि ठूली छोरीको विवाह भयो । स्थिति केही सुध्रि सकेको हुनाले राम्रै परिवारसँग सम्बन्ध गाँस्न पाएकोमा सबै खुसी भए । उता हिमलालले हाई स्कुल पास गरेकोले काठमाडौँ पढ्न जाने इच्छा गर्‍यो । काठमाडौँमा खर्च गरेर पढाउन सक्ने स्थिति नभएपनि सामान्य नोकरी गरेर पढ्ने योजना सहित हिमलाल काठमाडौँ हानियो ।होटेलमा बेलुका काम गर्ने र बिहान पढ्ने गर्न थाल्यो ।साथीहरू तथा अरू चिनजान धेरै भएपनि खराब सङ्गतमा चाँही लागेन । सम्पर्क आदिले गर्दा कसरी संसारको अल्लि विकसित मुलुक जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लग्न थाल्यो र संयोगले उसले अमेरिकाका लागि भरेको डि भी चिठ्ठा उसलाई पर्‍यो र उ अमेरिका जान सक्षम भयो।
डि भी चिठ्ठा परेको खबरले सबै घर-परिवार र आफन्त खुसी भए तर नारद र फूलसरामा भने एक्लो छोरा, अब त घरको परिथिति पनि ठिकै भएको छ, कहाँ जाने होला ? कस्तो होला त्यो अमेरिका ? भनेर चिन्ता पनि छायो खुसी सँगै उनीहरूमा ।अमेरिका जान पाएपछि नजाने कुरै भएन, त्यसमाथि जुनसुकै विदेश जान खुट्टा उचालेको मान्छे ।सबै कुराको व्यवस्था मिलाएर साथै तराई र पहाडतिर रहेका आफन्तहरु भेटघाट गरी अमेरिका जान अन्तिम तयारीमा पुग्यो । केही वर्ष काठमाडौँ बस्दा काठमाडौँको राष्ट्रियताले पनि उसलाई गाँजिसकेको थियो। काठमाडौँ छोड्न घर छाड्न जत्तिकै गाह्रो भयो, हिमलाललाई । हुनत, उसका पहाडदेखिका स्मरणहरु उसको मानस पटलमा आईरहन्छन तर पनि जहाँ बस्यो त्यंही सम्बन्ध बन्ने र अर्को राष्ट्रियता सिर्जना हुने कुरा उसको जीवनमा धेरैचोटी देखिन्छ ।
अर्थात् समग्रमा फरक फरक संकृतिको निर्माण भयो । आज ती हिजोका सबै आफन्तहरु समयको अन्तरले पराइ जस्तै मात्र नभई फरक र कतिपय हिंस्रक जन्तु जस्तै पनि बनेका छन् । तर अहिले विश्वव्यापीकरण र विभिन्न सुबिधाहरुले फेरी सबै नजिक बनाउन खोजेको भान हुन्छ ।मानिसहरू अहिले समिश्रित भएर बस्न थाले । यो Dynamic विश्वमा कुनै पनि चिज स्थायी रहेनछ। मौलिक रूपमा जे थियो त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यो जहाँ गएपनि प्राण भन्दा प्यारो छ । तर पनि पृथ्वी मानिसको ठुलो घर हो भने, मानिसहरू यस बृहत् परिवारका सदस्यहरू हुन्।जहाँ गएपनि मानव हितका निम्ति काम गर्नु र मान्छे भएर सभ्य जीवन बिताउनु नै ठुलो कुरा रहेछ, सारा कुरा परिबर्तनशील रहेछन् ।” र यसरी उनी र उनको परिवार चित्त बुझाउने परिस्थितिमा छ ।
“कथा फूल हो भने उपन्यास बगैंचा हो” – यस लघु उपन्यासका पात्रहरु काल्पनिक हुन्, कहीँ कतै मिल्न गएमा संयोगमात्र हुनेछ
(स्रोत : BrtNepal)
This entry was posted in नेपाली उपन्यास and tagged Umapati Bhusal. Bookmark the permalink.